UMaria Yaremchuk uphendule ukuphawula mayelana nokufana kwakhe noRihanna - Bonisa Ibhizinisi 2022
UMaria Yaremchuk uphendule ukuphawula mayelana nokufana kwakhe noRihanna
U-Rihanna wase-Ukrainian - yilokhu uMaria Yaremchuk, omunye wabameleli abakhangayo kakhulu futhi abahlelekile bebhizinisi lombukiso wasekhaya, uye wabizwa ngokuphindaphindiwe.
E-United States, uMaria Yaremchuk wayenephutha nodadewabo womculi waseBarbados, ephawula ukufana kwangaphandle kwamantombazane. Futhi ekhaya, inkanyezi yaze yasolwa ngokukopela nokulingisa umculi waseMelika.
Kodwa-ke, uMaria wasabela ngobuciko ekuqhathaniseni okunjalo - ekhonsathini yakamuva e-Lviv, umculi wenza ingoma yezingoma zomdabu zase-Ukraine ingoma ethandwayo kaRihanna ethi "Kakhulu".
Umculi wabelane ngevidiyo evela emdlalweni ekhasini lakhe le-Facebook.
- "Bangasho ukuthi whateva, Ima do whateva" - "Bavumele basho noma yini abayifunayo, futhi ngizokwenza lokho engikufunayo" - mhlawumbe le migqa evela ekuqanjweni kukaRihanna ibonisa isenzo sikaMaria.
Njengesikhumbuzo, u-Yaremchuk njengamanje usebenza ngenkuthalo ekwakhiweni kwezinto zomculo futhi kakade lokhu kukwindla kuhlela ukujabulisa abalandeli ngomsebenzi wevidiyo ohlanganyelwe wesithathu nomqondisi odumile u-Alan Badoev engomeni entsha yolimi lwesi-Ukraine ethi "Do Nesty".